Wax kabaro sababaha keena Af urka iyo sida lagu daweeyo - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
→ Wax kabaro sababaha keena Af urka iyo sida lagu daweeyo
Wax kabaro sababaha keena Af urka iyo sida lagu daweeyo
Weligaa ma ay dabiicadda lahaa in aad neefta ceshato, maxaa yeelay, ma aad istaagi karin ur afka cascas oo ka soo shaqayn jiray kale? Ma leedahay dabar ilkaha in lagugu ceebeeyo marka aad leedahay in la furo afka aad u kala qaad iyo guffaw? Ma u malaynaysaa in lamaanahaaga aan wax ku filan marka la eego nadaafadda ilkaha iyo afka, iyo in tani ay mas’uul ka ah kuwa ilkaha coroge laga yaabaa in?
Marka ay timaado in la gaaro caafimaadka ugu wanaagsan ee ilkaha iyo afka, aad nadaafadda afka shakhsi ciyaaraa door aad u muhiim ah halkan. Good caafimaadka ilkaha iyo afka ay ka baxsan si joogto ah u cadaydo aad. Si loo hubiyo caafimaadka ugu wanaagsan ee ilkaha iyo afka ee nolosha, waa in aad u tagto ka baxsan cadaydo saaka dhaqanka. Si mug leh caafimaadka ilkaha iyo afka oo ku lug leh daryeelka ilkaha, cirridka, carrabka, iyo afka.
Ilkaha iyo caafimaadka afka xumaato marka daryeel ku filan lama siiyo sida ugu macquulsan. Siinta aad nadaafadda afka dareenka ugu fiican waa tan ugu muhimsan tan iyo markii ay si looga hortago cudurada suuska ilkaha iyo ciridka tagaa waddo dheer. Dhibaatooyinka ilkaha qaarkood sida ilkaha qalloocan, malocclusion iyo overbites jira si kastaba ha ahaatee la iska dhaxlo. Waxaa jira dhowr dhibaato caafimaad oo soo sabab u ah nadaafadda ilkaha iyo afka oo aan ku filnayn, iyo qaar ka mid ah hoos ayaa lagu sharxay: